140cm ilaa 150cm Doll Series oo ku yaal Urdolls
Qiimo jaban iyo 148cm caruusado tayo sare leh oo iib ah
Ku soo dhowow Urdolls 145 cm ilaa 150 cm taxanaha doll. Waxaan ku diyaarinay dhammaan caruusadaha u qalma halkan. Dhamaan caruusadaha waxay leeyihiin qalfoof bir ah oo qeexan gudaha. Iyagu waa kuwo waara oo aan qaali ahayn, wayna qancin karaan muuqaal kasta oo aad rabto. Haddii aadan heli karin badeecad aad ku qanacsan tahay, fadlan si xor ah nala soo xiriir.
Alma - 146CM C-cup WM NO.204 Madaxa Maqaarka Cad TPE Jinsiga Doll
Aurorae - 145CM B koob Irontech Doll White Maqaarka TPE Jinsiga Doll
Ava - 142CM K-Cup WM Blonde Slim Light Tan Maqaarka Tpe Sex Doll
Cathy - 145CM Naaso Yaryar Oo Caan Ah Oo Dhar Yar Ka Sameeya Ice Cream Girl TPE Sex Doll
Moore - 145CM Aasiya Gabar Udiyaar garowsan Naasaha Baruurta Wajiga TPE Jinsi Doll
Beatrice - 146CM Timo Jaale Dheer Oo Dheeraad ah Qurxinta Qurxinta ee Cosplay TPE Doll
Nancye - 145CM Laab Yar Qulqulka Maqaarka Cad TPE Jinsi Doll
Xishoodka - 145CM Doll4ever TPE Doll Doll
Dhunkasho - 146CM Farxad Dhoola Cadeyn Shaqaalaha Hoteelka Cajiib Jaantus TPE Jinsi Doll
Darwin - 146CM Waji Macaan Timo Yar Gabar Yar Dameer TPE Jinsiga Doll
Maltz - 146CM Timo Madow oo Dheer Lab Daryeel Shakhsiyeed TPE Jinsiga Doll
Joyce - 146CM Ku Xadgudubka Galmada Timo Jaale Dheer Ah Qurux Qabiil TPE Jinsiga Doll
Hermosa - 146CM Maqaarka Laastikada ah Lover Raqiis Caan ah Cadaadiska Cadaadiska T Doll Doller
Jonson - 146CM Shakhsiyad Firfircoon oo Firfircoon
Gracie - 146CM Indho Aragsan oo Xasaasi ah Dastuur jilicsan oo Doll TPE ah oo Doll ah
Barton - 146CM naxariis naxariis leh Tilmaamo Slim Gabar Yar oo TPE ah oo Doll ah
Shabakadaha urdolls ee taxanaha doll laga soo bilaabo 145cm ilaa 150cm